Uri kuva nezvinetso neSafari here? Isu tinokuratidza maitiro ekugadzirisa | IPhone nhau
ZVAKAITWA: Dambudziko ratogadziriswa naApple. Iwe une zvimwe zvese zvemashoko pazasi.
Kana iwe wakamuka mangwanani ano, wakaedza kufamba uye ukacherechedza a hunhu husingazivikanwe mu safari, zvese paIOS uye OS X, zorora. Hausiwe woga. Ini ndanga ndichinyora chinyorwa pachangu kubva kuMac yangu, ndakaedza kutsvaga ndikazviona zvichitora nguva yakareba kutsvaga. Ini ndakachengeta basa rangu, ndikatangazve bhurawuza uye dambudziko rakaramba riripo. Ini ndakamanikidza Safari kuvhara uye hapana. Panguva iyoyo chaiyo uye zvakangoitika netsaona, ndakatarisa paTwitter ndikaona kuti mumwe wangu kubva kwandiri anobva kuMac Jordi Ndakanga ndatoburitsa kare mhinduro.
Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuziva ndechekuti dambudziko harisi neako iPad, iPhone kana Mac.Dambudziko iri neApple mune chimwe chinhu chichave chiri kuita uye iyo Mhinduro yatichakupa pazasi ndeyechinguva. Hazvizivikanwe chaizvo kuti chikonzero nei chiri kutadza, asi izvo zvinozivikanwa. Zvese isu zvatinofanirwa kuita kubvisa pfungwa dzebhurawuza, idzo dzinoita kuti titange kunyora zvimwe zvinyorwa zvinoenderana nezvatingafarire. Pane iyo iPhone, tinozoidzima seinotevera.
Maitiro ekugadzirisa iyo yazvino Safari kuparara
Tinotsvedza ndokupinda safari.
Ipapo Tinoremadza mazano eSafari.
Chekupedzisira, kana iwe uchiri kuona hunoshamisa hunhu, tinya kaviri pabhatani bhatani uye isu tinopfiga Safari kubva kune multitasking.
Kana ichi chipenga chagadziriswa, usakahadzika kuti isu tichakuzivisa nekunyora chinyorwa, kana isu tichagadzirisa izvi nekukuzivisa iwe pasocial network. Kana iwe uchida iwo mazano kana, sezvandiri, unofarira kuva navo uye kwete kumirira yambiro, unogona kuita nzira yakapesana kune iyo yakatsanangurwa uye tarisa kana Apple yatove "yakarova kiyi" iyo inotibvumidza kushandisa Safari sezvaisingafanirwe kunge yarega kuita. Zvafamba sei? Wakagadzirisa dambudziko rako here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Uri kuva nezvinetso neSafari here? Hausiwe woga. Tinokuratidza maitiro ekuzvigadzirisa
Dambudziko pane yangu iMac ine tabo uye kero bar. Ini ndadaidza Apple Kuchengeta uye kutanga ivo vandituma kunodzorera OS nemirairo R. Hapana. Ipapo kubva kuraibhurari bvisa zvaunofarira. Hapana. Pakupedzisira mhinduro yako ndeyechokwadi. Shuwiro yakanakisa.
Crashsafari.com ine chekuita nazvo? (Usabate kana kushanyira iyo webhusaiti), zvinoita saizi kupunzika uye "kusunungura" iyo terminal, kunyangwe ichigadziriswa neyakareruka yekutanga.
Zvakanaka, ndiri kuita zvakanaka pane zvese iyo iPad uye iyo iPhone!
Pane yangu iPhone, pandakabata kero bar, yakavharwa. Ini ndakabvisa cache uye makuki uye yakagadziriswa.
Wedzera kuti mune iyo iPhone 6 ini ndaedza kudzima chete sarudzo mukati meSafari «Spotlight Mazano» uye yarega kupa matambudziko. Sezvaunoziva, Safari kunze kwekuratidza kutsvaga pawebhu, zvakare inokuratidza mazano ezvemukati menyu.
Miguel Gallego akadaro
Mhoroi, vanoti zvakagadziriswa asi zvinoramba zvichiitika kwandiri. Handizive kana zvichiri kuitika kwauri.
Pindura Miguel Gallego
Victor R. akadaro
Mhoro kwandiri, haina kugadziriswa futi, mangwana ndichaedza zvakare.
Pindura kuna Victor R.
Shamwari yakanditumira nezuro nezve crashsafari uye ndakafunga kuti ndizvo. Asi kwete, nekuti ini ndanga ndisiri pa iPhone ndichivhura masikati pasina dambudziko. Yaiva mangwanani ano blockade.
Reactivate zvinhu zvakati wandei kusvika ndaona kuti nazvo zvabviswa, ndakafunga kuti ichave imwe mhosva yangu mu iPhone asi ini ndinoona kuti kwete, zvakajairika. Kana ndikaisa yakavanzika maitiro kunyangwe nemazano akaitwa zvakanaka.
MuMac OS ini ndanga ndichisangana nekero bar, yekunonoka kutsvaga uye kuti iwo matabo haana kuoneka nenzira kwayo mumenu. Ndakatamba zvinhu zvakati wandei uye handizive kana chimwe chinhu chandakadzvanya pabhatani rekuvandudza chakangoitika kana kuti ndichangopedza kudaro, kutangazve uye kuenda kunodya, pandakadzoka zvainge zvichifamba zvakanaka.
Ndakatarisa pane iPhone asi yanga ichiri
Izvo hazvina kugadziriswa kwandiri futi. Iyo inorembera kana ini ndikabaya pane iyi link mune email kana pawebhusaiti.
Chinhu chitsva? Iko kupenga.
Iyo iPhone 7 Plus inogona kuve nekaviri kamera uye optical zoom